मलाई केवल ईश्वरले मात्र मूल्याङ्कन गर्न सक्छन्? — यात्रा ली - आधिकारिक साइट
पछिल्लो सप्ताह, मेरी श्रीमती र म हाम्रो चर्च मा एक विवाह कार्यशाला उपस्थित. हामी हाम्रो विवाहको हरेक nook र cranny मार्फत हिंडे रूपमा, हामी राम्रो छलफल भएको थियो, खराब, र तितो. हामी प्रत्येक अन्य प्रोत्साहन गर्न धेरै संभावना थियो, तर हामी पनि कमीकमजोरी दर्शाउन संभावना थियो. हाम्रो छलफलको क्रममा, मेरी श्रीमती मलाई क्षेत्रमा म झर्ने छोटो छु जहाँ हेर्न मदत, म हुनुपर्छ रूपमा म कहाँ रूपमा मायालु हुनुको छैन छु. त्यो येशूको आज्ञा disobeying थियो मलाई न्याय गर्न? म त लाग्छ छैन.
येशूले यो कुनै पनि नैतिक न्याय गर्न गलत भन्ने अर्थ गर्न सक्दैन. केही पदहरू पछि, येशूले तिनीहरूले सत्य साझेदारी गर्ने बारेमा न्याय गर्न आफ्ना श्रोताहरूलाई बताउँछ. र पद मा 15 एउटै अध्याय को, येशूले अगमवक्ताहरू हुन दाबी गर्ने ती न्याय गर्न तिनीहरूलाई निर्देशन, तिनीहरूले साँच्चै परमेश्वरको कुरा वा भने हेर्न तिनीहरूले भेडाको भेषमा ब्वाँसाहरू हुनुहुन्छ भने. नैतिक नियमहरूले को बदलिने प्रकार गर्न हामीलाई आज्ञा कि धेरै अन्य धर्मशास्त्रको मा पदहरू उल्लेख छैन. येशूले सबै न्याय गलत छ भन्न होइन. अनि हामी आफूलाई इमानदार हुनुहुन्छ भने, त या त हामी मतलब छैन.
धेरै मानिसहरू कसैले न्याय कहिल्यै गर्नुपर्छ भनेर जिद्दी, तर तिनीहरूले साँच्चै भन्ने विश्वास छैन. तिनीहरूले आफ्नो घर अगाडि मदहोश बिक्री दबाइ व्यापारीहरु मा पुलिस कल गर्न गलत हो लाग्छ छैन. र तिनीहरूले पक्कै पनि यो कि लोभी प्रचारक आफ्नो मुद्रा को लागि फैलन सुरु गर्दा टिभी बन्द गर्न गलत हो लाग्छ छैन. त्यसपछि विडंबना त्यहाँ. तपाईं इन्साफ लागि कसैले कल गर्दा, तपाईं वास्तवमा भन्ने व्यक्तिको बारेमा एक नैतिक न्याय बनाउन छौं. यी अवस्थामा प्रत्येक, न्याय अरूको कार्यहरू बारे गरे भइरहेका छन्.
यद्यपि, न्याय घर कहीं नजिक हिट, स्वतः गलत. हामी अरूको न्याय गर्न भएका? उहाँले न्याय गर्न हामीलाई बताउँछ जब गरेको येशूले मतलब के विचार गरौं.
उहाँले के मतलब
हामी विभिन्न तरिकामा धेरै शब्द न्यायाधीश प्रयोग. हामी एक प्रतिभा देखाउने इन्साफ वा अदालत मामला इन्साफ कुरा गर्न सकिएन. यो फरक कुरा धेरै अर्थ राख्छ. त्यसै गरी, येशूले "न्यायाधीश" को लागि प्रयोग ग्रीक शब्द सधैं नै कुरा होइन. त्यसैले हामी यस खण्डमा बाँकी र बाइबल बाँकी हेर्न उहाँले चाहनुभएको कुरा बुझ्न हामी चाहनुहुन्छ भने छ.
तपाईं खण्डमा पढ्न जारी रूपमा, येशूले न्यायको विशेष प्रकारको आक्रमण स्पष्ट हुन्छ. उहाँले कसैको आँखा मा sawdust एक स्पेक याद मानिस एक उल्लसित छवि प्रयोग, तर उसले आफ्नो एक विशाल लग छ भन्ने तथ्यलाई बेवास्ता. त्यो एक नग्न मानिस आफ्नो जीन्स मा प्वाल आलोचना जस्तै छ. येशूले न्यायको कुनै पनि प्रकारको आलोचना छैन; उहाँले आत्म-धार्मिक आलोचना गर्नुपर्छ, छली न्याय.
पदमा5उस्ले भन्यो, "तपाईं कपटी, हामी अरूलाई न्याय गर्न प्रयास अघि पहिलो लग हाम्रो आफ्नो आफ्नै आँखा लिन। ", हामी आफूलाई न्याय गर्नुपर्छ. कपटीहरू तिनीहरू बेवास्ता कि स्तर मान्छे पकड. जबकि आत्म-धार्मिक मानिसहरू आफ्नो कमजोरीको बाहिर इशारा लागि विशेष उपहार छ, तिनीहरूले आफ्नै गर्न भुलक्कड हुनुहुन्छ. येशूले एक समस्या छ भन्छन्. अनि उहाँले हामीलाई बताउँछ परमेश्वरको बदलामा हामीलाई न्याय.
आफ्नो जीवन सिद्ध छ भने यो कठोर अरूलाई निन्दा गर्न र तिनीहरूलाई भन्दा खडा हास्यास्पद छ. परमेश्वरको सफा हातले मात्र न्यायाधीश छ. हामीलाई बाँकी फोहोर मान्छे हो, यस शवर प्रत्येक अन्य कुनै देखाउने.
उहाँले भन्छन् कहिल्यै याद, "लग आउट लिनुहोस्, र अन्य मानिसहरूको आँखा चिन्ता छैन। "उहाँले वास्तवमा भन्छन्, "पहिले आफ्नो आफ्नै आँखा बाहिर लग लिन, र तपाईंले भाइहरू आँखा बाहिर स्पेक लिन स्पष्ट देख्न हुनेछ। "उहाँले आफूलाई जाँच्न हामीलाई बताउन गर्नुपर्छ, त्यसपछि भाइ बाहिर मदत गर्न.
मलाई आफ्नो जीवनमा हानिकारक कुरा याद गर्न को लागि यो unloving छ, यसलाई त्यहाँ छैन जस्तै तर यसलाई बेवास्ता गर्न. म प्रेम कसैलाई विनाशकारी ढङ्गमा बाँच्न जारी किन गरौं थियो? यदि म तपाईंलाई प्रेम, म सत्य भन्छु छौँ यो दुख्छ हुँदा पनि. तर यो परमेश्वरको मानक आधारित हुनुपर्छ, मेरो आफ्नै छैन. र म यो मान्यता छ कि म के नै अनुग्रह आवश्यक नम्र मुद्रा देखि के गर्न छ.
कृपया मत्ती पालन 7:1. तर गलाती बारे मा भूल छैन 6:1: "भाइहरू, कसैले पाप मा पक्रेको छ भने, आध्यात्मिक छन् जसले तपाईंलाई बिस्तारै उसलाई पुनर्स्थापना गर्नुपर्छ। "हामी प्रत्येक अन्य आवश्यक.
MrAveryBrown • नोभेम्बर 12, 2013 मा 12:46 बजे • जवाफ
उत्साहजनक. Convicting. विचारशील. का हृदय जाँच गरौं, यो अवधारणा सिक्न प्रयास, दैनिक र यसलाई लागू.
स्टीव • नोभेम्बर 13, 2013 मा 4:31 बजे • जवाफ
राम्रो शब्द, यात्रा. धेरै व्यावहारिक, स्थिति यस प्रकार सामना गर्नेहरूका लागि उपयोगी अनुप्रयोग. अनुग्रह र शान्ति…
esteban ramirez • नोभेम्बर 12, 2013 मा 12:57 बजे • जवाफ
यो कि पद सबैभन्दा सही परिभाषा छ. धन्यवाद म यो संग संघर्ष गरिएको छ भाइ. धन्यवाद मेरो भाइ तिमी के गर्दै गर्नेगर!
ख्रीष्टमा आफ्नो भाइ!
चार्ल्स • नोभेम्बर 12, 2013 मा 1:07 बजे • जवाफ
मेरो पास्टर बस यो भन्दा गए रूपमा हप्ता पहिले यो मेरो मनमा ताजा छ. पास्टर ब्रायन भने “यदि तपाईं ग्रीक पढ्न र सन्दर्भमा यो पढ्न न्यायाधीश छैन उचित शब्द हो।” उहाँले एक राम्रो अनुवाद भएको थियो भन्न गयो “एक न्यायाधीश रूपमा वाक्य छैन” वा न्यायाधीश जस्तै व्यवहार (पुरानो testement शैली). एक न्याय बनाउन र एक वाक्य पारित गर्दै2विभिन्न कुराहरू.
मील माइल Rivera • नोभेम्बर 12, 2013 मा 1:10 बजे • जवाफ
Aint nothin तर सत्य :) आमिन भाइ.
येरेद • नोभेम्बर 12, 2013 मा 1:25 बजे • जवाफ
यो अहिले साँच्चै मेरो जीवन मा उपयोगी छ. म भर्खर मेरो हजुरआमा संग छलफल भइरहेको गरिएको छ छैन जो एक विश्वासी, र म उनको परमेश्वरको प्रेम देखाउन प्रयास छु. म उसलाई मेरो पाप स्वीकार र उनको क्षमा माग्न, र त्यो क्षमा हुनेछ तर त्यो बारेमा म केही कुराहरू छु कसरी खराब rant हुनेछ. मलाई थाहा म किनभने म पहिले नै परमेश्वरको महसुस दृढ विश्वास को गलत छु, किनभने त्यो उनको आफ्नै पाप देख्न गर्छ, तर यो मेरो bothers थोडा. त्यो बस मलाई तल खण्डन. म मुस्कान र उनको प्रेम. म मेरो परिवार मायालु संग मुद्दाहरू छन् भनेर बुझ्न, तर यो एक सानो बिट भित्र मलाई bothers त्यो उनको आफ्नै पाप स्वीकार छैनन् जब र गर्दैन त मेरो स्वीकार्न छिटो छ. यो हुनत केही मद्दत छ. धन्यवाद
Ezra_of_Israel • नोभेम्बर 12, 2013 मा 1:31 बजे • जवाफ
यो र पद को विश्लेषण राख्दै को धेरै राम्रो तरिका. परमेश्वरले तपाईंलाई आशिष. माया के हो? म सरल प्रश्न मा लामो समय खर्च गरिएको छ ...... ओह
PastorBenJohnson • नोभेम्बर 12, 2013 मा 1:34 बजे • जवाफ
दाँया मा! यो संग जान, पावलले भन्छन् 1 कोरिन्थी 5:12: “के व्यापार चर्च बाहिर ती न्याय गर्न मेरो यो छ? तपाईंले ती भित्र न्याय छैन।”
विश्वासीहरूलाई ख्रीष्टको जवाफदेही मा भाइबहिनीको पकड रूपमा यो हाम्रो काम छ. तर, हामी भर आफूलाई केलाउँदा गर्न आवश्यक! ठूलो ब्लग यात्रा ली!
harryyeboah • नोभेम्बर 12, 2013 मा 1:47 बजे • जवाफ
वाह! धेरै सिकेका. भगवान आशीर्वाद।.
EboniRenee • नोभेम्बर 12, 2013 मा 1:49 बजे • जवाफ
Beautifulluy & thoughtfully राख्न. हामी यो आवश्यक.
टोनी • नोभेम्बर 12, 2013 मा 2:00 बजे • जवाफ
धन्यवाद यात्रा, यो सही बुझ्न पद एउटा महत्त्वपूर्ण भाग हो. यो पोस्ट को लागि धन्यवाद. म के सोच छ तपाईं शब्दहरू हालिदिए छन्. म एक युवा पास्टर छु, र यो कुरा खाद्य Additive बारेमा मेरो विद्यार्थी संग कुरा गर्न चाहने गरिएको छ. म यी बुँदाहरू यो पोस्ट प्रयोग र विस्तार गर्न निश्चित हुनेछ. फेरि धन्यवाद, तपाईं र के हुनेछ भनेर लागि. म परमेश्वरको तपाईं र तपाईंको परिवारलाई आशीर्वाद जारी हुनेछ भनेर प्रार्थना.
Wesley • नोभेम्बर 12, 2013 मा 2:04 बजे • जवाफ
अति उत्तम. म मान्छे को त थाकेको छु [मसीहीहरूले Forefront छन्, धेरै अरूलाई साथ] यो पद बाहिर फालिएको यो सबै trumps जस्तै. यो ________ निःशुल्क कार्डको बाहिर प्राप्त प्रयोग गरिन्छ. छैन मा लेखक भन्दै थिए के सबै. articulating लागि धन्यवाद.
घास • नोभेम्बर 12, 2013 मा 2:13 बजे • जवाफ
उत्कृष्ट शिक्षण यहाँ. म सधैं तपाईंको पोष्ट आशिष् छु. म उसले गर्छ बाटो प्रयोग परमेश्वरलाई धन्यवाद. तपाईं बस संगीत बनाउन भनिन्छ छैन, तर pulpit गर्न.
भगवान यू र आफ्नो परिवार आशीर्वाद!
शेरोन सी. जेम्स • नोभेम्बर 12, 2013 मा 2:14 बजे • जवाफ
यो विचार साझेदारी धेरै धन्यवाद. म आफ्नो पोस्ट साझेदारी गरिनेछ र प्रार्थना यो आफ्नो ब्यानर गरेका छन् कि धेरै भन्ने, ख्रीष्टको यो भनाइको तात्पर्य ठीक रूपमा बुझ्न, साथै गलाती रूपमा 6:1. अनमोल रहनुहोस्.
क्रिस्टोफ • नोभेम्बर 12, 2013 मा 2:17 बजे • जवाफ
म यूहन्ना फिर्ता उद्धृत येशूले चाहनुहुन्छ 7:24 – “एक धार्मिक न्याय संग न्याय।” कि आपत्ति disarms र उहाँले अर्थ खोलिदिन मौका मा जान्छ, तपाईं आफ्नो पोस्ट मा जस्तै.
Gloglo • नोभेम्बर 12, 2013 मा 2:18 बजे • जवाफ
यो के म मेरो पिताजी संग कुरा थियो र त्यो सही नै कुरा हो. भगवान तपाईंलाई आशिष म आशा सबैले यो पढ्न भनेर
MJ • नोभेम्बर 12, 2013 मा 2:19 बजे • जवाफ
राम्रो शब्द. म हामी निन्दा गर्नु हुँदैन भनेर सुनेको छु, तर righteously न्याय गर्न सक्नुहुन्छ. म छ जो एक मित्र बारे केही भन्न सक्छौं जस्तै “माथि shacking” तर यसो, किनभने म यो गरिरहेको छैन छु म छली भइरहेको छैन छु.
मार्क राजा • नोभेम्बर 12, 2013 मा 2:26 बजे • जवाफ
यो यात्रा मा elaborating लागि धन्यवाद. यो एक धेरै महत्वपूर्ण विषय टिन यो पुस्ता छ. धेरै entitlement अवस्थित. तपाईं औंल्याए विडंबना प्रेम, धेरै.
म समस्या रूपमा प्रत्येक न्यायको धारणा हेर्न. हाम्रो प्रतिस्पर्धी natures तरिका exaltation एक प्रयास हो भने कसैले हामीलाई बताउन भनेर हामी केही माटो मा गलत हो सोच हामीलाई झुक्याउन. हामी प्रेम इशारा रूपमा यो हेर्न भने, यो एक पूर्ण बिभिन्न गतिशील मा लिन्छ.
म समातिए कि थप एक कुरा… तपाईं मान्छे भ्रममा सक्ने तरिकामा यो एक विशेष भाग phrased. तिमीले भन्यौ, ” येशूले गर्दैन “अर्थ” सबै न्याय गलत छ भन्न. अनि हामी आफूलाई इमानदार हुनुहुन्छ भने, हामी के “अर्थ” कि त.
बस स्पष्टता खातिर, सायद वाक्यांश एउटा राम्रो तरिका यो हो “हामी यो व्याख्या गर्नु हुँदैन येशूले यसो” सबै न्याय गलत छ.
मार्फत एक द्रुत पढ्ने, र कसैले सोच यो पढेर जाने सक्छ, “ओह, येशूले भन्न मतलब थिएन?” म एकदम निश्चित येशूले छु जब उहाँले भन्नुभयो ठ्याक्कै भन्न चाहनुभएको. यसलाई व्याख्या मा ll छ.
म चाहनुभएको के थाहा. बस साहित्यिक स्तर भने उच्चतम तपाईं पकड. म भने किन बुझ्न भरोसा.
आफ्नो काम मोल (सबै यो भने, केवल संगीत)! भाइ पीस राख्न!
दिन • नोभेम्बर 12, 2013 मा 2:35 बजे • जवाफ
गहिरो सत्य यो एक मा बोली भइरहेको.
परमेश्वरले आफ्नो सेवाको आशीर्वाद.
म अक्सर हामी पूर्णतया पापले हाम्रो राज्य बुझ्न गर्दा लाग्छ, हामी त दया र प्रेम हाम्रो छिमेकी दृष्टिकोण.
anajcruz • नोभेम्बर 12, 2013 मा 2:42 बजे • जवाफ
म यो प्रेम!! साँच्चै insightly, उत्साहजनक, aaaand convicting!!!
यो एकअर्कालाई प्रेम गर्न अर्थ के को उत्कृष्ट रिमाइन्डर!! धन्यवाद भाइ! परमेश्वरको आशिष!!
उल्लेख: मलाई केवल ईश्वरले मात्र मूल्याङ्कन गर्न सक्छन्? (द्वारा BuilttoBrag.com ब्लग को यात्रा ली) | Ron "Big Black" गैरेट
WayneChristian • नोभेम्बर 12, 2013 मा 3:59 बजे • जवाफ
मात्र येशूले राम्रो भने! तपाईं ताजा हावा को एक सास छन् यात्रा! आफ्नो परिश्रम लागि धन्यवाद! राम्रो सधैं लेखिएको! भगवान गति मेरो भाइ!
JosiahCarter • नोभेम्बर 12, 2013 मा 7:31 बजे • जवाफ
हो! यो लेखन को लागि धेरै धन्यवाद! यो धेरै हाल मेरो मन मा छ, विशेष गरी जब म शब्द हेर्न “न्यायाधीश”. म पक्कै यो साझा छु!
दाऊदले • नोभेम्बर 12, 2013 मा 8:02 बजे • जवाफ
धन्यवाद. कि पद र के को सबैभन्दा सही वर्णन को एक यो मैले देखेको भन्ने हो. अर्को कुरा गर्दा हरेक मसीही देवता आँखा मार्फत आफूलाई जाँच्न गर्नुपर्छ.
carlosAviles • नोभेम्बर 12, 2013 मा 8:50 बजे • जवाफ
धेरै उत्साहजनक. र म प्रयास र असफल. म समय समयमा आफैलाई पकड र म म बोल्न अघि म पहिलो भित्र हेर्न र कसैलाई पवित्र बाटोमा फिर्ता प्राप्त गर्न मदत गर्नुपर्छ.
धन्यवाद यात्रा ली.
modallas • नोभेम्बर 13, 2013 मा 1:53 छु • जवाफ
म DIS संग संघर्ष गर्नुभएको. अब म एक राम्रो समझ पायो!!!
modallas • नोभेम्बर 13, 2013 मा 1:54 छु • जवाफ
म बिन यो संग संघर्ष गर्नुभएको. परमेश्वरलाई धन्यवाद म एक राम्रो समझ पायो
TeriR • नोभेम्बर 13, 2013 मा 6:44 छु • जवाफ
हामी हाम्रा भाइहरूको न्याय सहयोगी वा हानिकारक बनाउँछ भन्न के यो पछि हाम्रो मनसाय हो. म सोच्दै छु, “के तपाईं गरिरहनुभएको गलत छ! बाइबल त भन्छन्. तपाईंले यसलाई समाधान गर्न आवश्यक छ…” वा यो छ, “त्यो gonna कारण दुखाइ हो र म जस्तै के थाहा. म ख्याल र तपाईं को लागि कि चाहँदैनन्…”
जस्तै यात्रा भने, अन्य ठाउँमा हामी झूटा शिक्षकहरू न्याय गर्न स्पष्ट भन्नुभयो हुनुहुन्छ.
यसलाई हामी इन्साफ गर्न पवित्र आत्मा गरेको खुट्याउने आवश्यकता स्पष्ट छ, त्यसैले हामी उहाँलाई जडान गर्नुपर्छ अघि, समयमा, र पछी!
अर्को राम्रो बिन्दु यात्रा बनाएको छ, हाम्रो हृदय ठीक ठाउँमा छ भने पनि हामीलाई सुन्नुहुने छैन, हामी परमेश्वर र हाम्रा भाइहरूले अघि authentically जीवित हुनुहुन्छ भने.
जुनियर • नोभेम्बर 13, 2013 मा 7:40 छु • जवाफ
Ive अहिले गर्दा लागि यो संग संघर्ष गरिएको. तर यो लेख पढ्ने मलाई महसुस गरेको छ 10 पटक अघि भन्दा राम्रो. धन्यवाद यात्रा! भगवान भाइ आशीर्वाद.
EJD • नोभेम्बर 13, 2013 मा 8:10 छु • जवाफ
उत्कृष्ट लेख! “आफ्नो फल द्वारा, तिमीहरूले ती थाहा हुनेछ।” स्पष्ट ख्रीष्टको whats हामीलाई अरूलाई समीक्षा मा circumspect हुन – सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, हामी सुसमाचारको घोषणा गर्दा, पहिलो भाग एक व्यक्ति कारण पापको लागि एउटा पवित्र परमेश्वरको अलग कसरी व्याख्या गरिएको छ (एक नैतिक न्याय हो!) त्यसपछि हामी येशू ख्रीष्टमा विश्वास घोषणा (क्रुसको र चिहान रित्तो आफ्नो redemptive काम) परमेश्वरले मानिसको अलग जवाफ छ, बाबा! सुसमाचारको सन्देश भने अपूर्ण छ
हामी मानव हराएका स्थिति बाहिर छोड्ने (व्यवस्थाको हामीलाई न्यायाधीशहरूले!) तर ख्रीष्टले हामीलाई पापी गर्न अनुग्रह प्रदान गर्दछ. रूपमा यूहन्ना न्यूटन लेखे, “म एक पटक हराएको थियो, तर अब भेट्टाएँ छु!”
Tatenda • नोभेम्बर 13, 2013 मा 10:57 छु • जवाफ
आमिन पुल. म जिम्बाब्वे बस्ने र पद यहाँ पनि लोकप्रिय छ!!! म सुसमाचार प्रचार र म सुधार विरुद्ध ढाल रूपमा यो पद प्रयोग सही जीवित हुन् कि गैर-विश्वासीहरूलाई र मसीहीहरूले सम्झना गर्न ख्याल भन्दा म बढी पटक सूचना जारी गरेको छ. यो दुःखी छ, साँच्चै दुःखी…
ब्रुनो • नोभेम्बर 13, 2013 मा 11:48 छु • जवाफ
Darnell • नोभेम्बर 13, 2013 मा 3:18 बजे • जवाफ
म पूर्ण मत्ती अनुसार न्याय को कि व्याख्या सहमत 7. म पनि भने त्यो थप गर्न ख्रीष्टियनहरूले हामी हो कि चाहन्थे “न्यायाधीश” संसारको वा ख्रीष्ट छैन ती, तर हामि “न्यायाधीश” ख्रीष्टको वा चर्च को शरीर. परमेश्वरले उहाँले भन्छन् “न्यायाधीशहरूले” संसार र हामीलाई आफ्ना छोराछोरीलाई. 1 कोरिन्थी 5:12-13
उल्लेख: आफैलाई र अरूलाई न्याय मा यात्रा ली देखि लेख « 360युवा
स्टीफन • नोभेम्बर 13, 2013 मा 5:27 बजे • जवाफ
केट • नोभेम्बर 13, 2013 मा 7:06 बजे • जवाफ
हे ~ म न्याय यो आइतबार प्रचार छु (वा lol) र म प्रतिलिपि गर्न सक्नुहुन्छ भने / मेरो प्रवचन मा आफ्नो विचार केही पेस्ट सोच छु? धन्यवाद! केट
क्लेटन • नोभेम्बर 13, 2013 मा 10:01 बजे • जवाफ
धेरै अचाक्ली, भगवान ब्रो आशीर्वाद
उल्लेख: बिहान मैशप 11/14 | धर्मशास्त्र विषयहरूलाई
उल्लेख: HACM साप्ताहिक राउन्डअप [11/15/13] | हार्वर्ड एवेन्यू कलेज / क्यारियर मंत्रालय
पराजित • नोभेम्बर 18, 2013 मा 1:38 बजे • जवाफ
म तिमी मान्छे मार्फत परमेश्वर र परमेश्वरको बुद्धि अनमोल शब्द प्रेम कदर… धेरै माया
उल्लेख: मसीही कस्तो देखिदैन? | सियोल मा सोल लागि खोजी
टायलर • नोभेम्बर 26, 2013 मा 1:07 बजे • जवाफ
धन्यवाद यो पोस्ट को लागि धेरै. म सुन्न सबै जीवन को हिँड्छ यो सन्देश मसीहीहरूको लागि त आवश्यक छ विचार. हामी जो मतलब दया मा सम्बोधन गर्न आवश्यक सम्बोधन क्षेत्रमा प्रत्येक अन्य येशूले हामीलाई भनिन्छ बाटो मायालु सुरु गर्न आवश्यक.
pelumi • नोभेम्बर 26, 2013 मा 5:56 बजे • जवाफ
यो वास्तवमा मलाई मदत
तपाईं यात्रा आशीर्वाद
केथ्रीन • नोभेम्बर 27, 2013 मा 8:51 बजे • जवाफ
कृपया म सत्य गर्न खुला हृदय हुनेछ भनेर प्रार्थना; म थाहा हुनेछ र स्वतन्त्र हुन कि; म मेरो पाप को येशूमा विश्वास र पश्चात्ताप हुनेछ कि. कि म आफ्नो अनुग्रह प्राप्त हुनेछ. कि म मेरो आवश्यकता द्वारा तर पाप द्वारा आहत गरिनेछ. धन्यवाद.
elvis • डिसेम्बर 4, 2013 मा 11:09 छु • जवाफ
यो शब्द साझेदारी गर्न जसरी छ….यसको reaaly खोल्ने आँखा तिमी सिर्फ यी ब्लग यात्रा भने के…सेवकाईमा जारी राख्न (ती सबै)..
उल्लेख: यात्रा ली – मलाई केवल ईश्वरले मात्र मूल्याङ्कन गर्न सक्छन्? » क्रिश्चियन Apologetics & बुद्धि मंत्रालय
उल्लेख: यात्रा ली - मलाई केवल ईश्वरले मात्र मूल्याङ्कन गर्न सक्छन्? | ग्रेस Apologetics को ग्रेस ApologeticsServants सेवकहरू
माइकल • जनवरी 29, 2014 मा 12:47 बजे • जवाफ
तपाईं साँच्चै यो सोच्न भने, “मलाई न्याय छैन।”, वास्तवमा आलोचक छ.
कसैले तपाईंलाई मदत गर्न प्रयास गरिएको छ भने, र तपाईं न्याय तिनीहरूलाई दोष……प्राविधिक, तपाईंले तिनीहरूलाई न्याय छन्. (र wrongly कि तिनीहरूलाई दोष लगाउँदै)
इमान्दारी पुर्वक, तपाईं चाहनुहुन्छ भने तपाईंले मलाई न्याय गर्न सक्नुहुन्छ, म सुधार आवश्यक पर्दछ. (“प्रेममा सही”) बस मेरो विगतका लागि वा शब्द तर केहि गरेर मलाई न्याय छैन.
कृपा • फेब्रुअरी 19, 2014 मा 10:29 छु • जवाफ
वाह. यो एक महान पोस्ट थियो. हाल, म मत्ती को आफैलाई स्मरण गराउन प्रयास गरिएको छ7तर प्रकारको यसलाई के अर्थ भूल. र हामी यसको बारेमा कठोर हुन बाहिर प्रत्येक अन्य सहयोग गर्न तर आवश्यक. म पूर्ण सहमत. यो थोडे दुःखी देखेर PPL कठोर अन्य PPL आलोचना र आलोचना महसूस देखेर भङ्ग छ. को आलोचना स्पष्ट छैन सिद्ध छन् तर तिनीहरू पनि छैन यो महसुस जस्तो देखिन्छ. यो upsetting छ. थप मानिसहरूलाई मत्ती द्वारा बाँच्न आवश्यक 7. र अन्तिम पद ठूलो थियो. मान्छे जहाँ sidelines सबैले तिनीहरूलाई थूकना छन् बाटो हिंड्न चाहनुहुन्छ छैन जाँदैछन्.
सिमोन • मार्च 12, 2014 मा 1:07 बजे • जवाफ
वाह, प्रेरणादायक शब्द. म तपाईंको पोष्ट बढी पढ्न! ;)
अप्रिल • मार्च 23, 2014 मा 11:14 छु • जवाफ
वाह!!! खुशी कोही अन्त मा यो बोली छ!!! म सिर्फ दिन को एक जोडी पहिले यस बारे मेरो कार्यालयमा कसैले कुरा थियो!!!! सुन्दर ब्लग!!
केली • सक्छ 8, 2015 मा 9:10 छु • जवाफ
त्यसैले यहाँ तपाईं को लागि एउटा प्रश्न छ. पछिल्लो केही वर्ष को लागि म केहि लागि जो कोहीले jugding छैन काम गरिएको छ. संसारमा एक दुर्व्यसनी धेरै ज्यादा सबैलाई तपाईं jugdes र यो तरिका यी मान्छे अब तिम्रो बारेमा सबै कुरा थाहा अर्थ रूपमा. पनि के तपाईंको सोचाइ वा के तपाईंको gonna के वा तपाईं कार्य वा तिनीहरूले तपाईं केहि महसुस कसरी तपाईंलाई बताउन सक्छ कसरी पनि. म साँच्चै मान्छे यो कसरी गर्न सक्छौं मिल. यसको साँच्चै खराब. म त्यहाँ धेरै मानिसहरू त्यहाँ मलाई घृणा छन् पत्ता लगाउन आएका छन्, र तिनीहरूले कहिल्यै पनि मलाई भेट्नुभयो. हाम्रो टाउको मा पप के नियन्त्रण गर्न कुनै तरिका theres. मानसिक पूर्व jugdment कुराहरू आफैलाई व्यक्तिगत तयार गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ लाग्छ तिमी कुनै बारेमा सूचना के को कारण occure सक्छ. तर तपाईं अझै राम्रो ध्यान र कसैले बारेमा तथ्य देखाउँछ कि सानो कुरा मा टिप्न सक्नुहुन्छ भने त्यो अझै jugding छ? र त्यसपछि धारणा बारेमा प्रश्न theres. कोही jugde गर्न टाढा सबैभन्दा खराब तरिका द्वारा. म यसलाई मिल. तपाईं बस यो व्यक्ति भन्नुभयो तापनि केही कार्य को कारण पूरा गर्न तिनीहरूलाई भरोसा तपाईं dont (सामान्यतया कुनै कारण) OTHER त्यसपछि म कसरी महसुस बस thats र म तपाईंलाई के हुनेछ थाहा के हो. यदि यो व्यक्ति असफल ज्ञात गरिएको छ को पाठ्यक्रम, इतिहास र बारम्बार हुनेछ सक्नुहुन्छ, तर कसैले बताउन तिनीहरूले महसुस कसरी, लाग्छ, वा कार्य गर्न जाँदै कसरी त्यहाँ मुस्ताङको स्याउको भाउ छोईसक्नु छ. यसको मूल अन्धो jugdment. र त या त व्यक्ति अब encompetant महसुस हुनेछ र अभ्यस्त पनि प्रयास, वा कसैले मलाई मन, व्यक्तिको तिनीहरूले फेरि कहिल्यै भन्न हुनेछ भनेर गलत साबित गर्न guentee हुनेछ. तर तपाईं फेरि समय र समय आफैलाई प्रमाणित पनि. एउटै अनुमानको. विचार? म सबै दिन जान सक्छ.
उल्लेख: यात्रा ली - मलाई केवल ईश्वरले मात्र मूल्याङ्कन गर्न सक्छन्? - सर्च- ग्रेस सेवकहरू
उल्लेख: मलाई केवल ईश्वरले मात्र मूल्याङ्कन गर्न सक्छन्… | विश्वास गरेर हँसिलो